Zvidiki, zvakanakisa uye zvine humwari: Mapurojekiti matsva ekuunganidza vanhu vakawanda mumutambo forge - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Jonas Dammen | May 13, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, crowdfunding, nhau
Iyo game forge parizvino yakazadzwa zvakanaka. “Simbi” sere dzakamirira ipapo vapfuri vesimbi. Kurova kwakawanda kwesando kwevapfuri vesimbi vakawanda kwakareva kuti, kunze kwezvirongwa zviviri zvichangoburwa, zvose zvakatobudirira kubudirira pachinangwa chavo chemari. Mufaro unofanira kunyanya kuva mukuru kune muparidzi mudiki weGerman ane mapurojekiti maviri akabudirira mukugadzira panguva imwe chete.
Kunze kwepurojekiti yakatanga nhasi uye chirongwa changa chiripo sechitarisiko kusvika nezuro uye chakatanga nenguva nezuro, zvirongwa zvese zvasvika pachinangwa chazvo. Zita rekutanga remwaka wechina we "Little Fine Ones" mavhinga inotsigirwa zvakabudirira maawa mashoma nguva yekubhadhara mari isati yapera. Saka kana iwe uchida kuvepo ipapo ipapo kune yekutanga zita, iwe unofanirwa kukurumidza. Kune mamwe mapurojekiti ari munhevedzano, zvakadaro, pachave nemukana wekusarudza pasuru yakazara kubva mumitambo misere yemwaka wechina. Mutambo wazvino waUwe Rosenberg Oranienburg Canal zvino yasvika nekagumi pane yavakavavarira uye yakagadzirira kutsigira mamwe mazuva mana. Akropolis uye Piri vanopihwa mari inosvika 140% kana kungodarika 250% mazuva gumi nerimwe chete mari isati yapera. Mitambo miviri yakasimba yemari Radlands uye The Dark Quarter vakatopeta zvinangwa zvavo zvakapetwa kana. Unopedzisira wakuda Akropolis uye Piri mune kaviri pack, asi imwe neimwe ichiri kuwanikwa kwemazuva makumi maviri.
Pilgrim - Inomhanya yako wega abbey
Mushandirapamwe wakabudirira weGamefound wakatangwa muna Kurume pilgrim. Mutambo uyu mubatanidzwa pakati peSpielworxx, avo vatanga chirongwa cheSpieleschmiede, uye A-Muse-Ment, avo vaitungamira chirongwa cheGamefound. Inopfuura 150% yechinangwa chekutanga chakaunganidzwa paGamefound. Ikozvino mushandirapamwe weshanduro yeGerman-Chirungu yatangawo mumutambo wefoge. Chinangwa pano chingori pasi pechegumi chechinangwa chakaiswa paGamefound. Ichi chinangwa chakazadzikiswa mazuva mashoma mushure mekutanga kwemushandirapamwe uye masvondo mana isati yapera nguva yekubhadhara mari.
Iro ibasa revatambi kutungamira avo abbey. Izvi zvinofanirwa kugadzirwa, kukwidziridzwa uye kuziviswa seumwari sezvinobvira. Mutambo unoshandisa mafambiro emitambo yemancala (bhinzi). Neizvi, vateveri vako vakakamurwa kuita mabasa masere uye capital kuona zviito mudenderedzwa rega rega. Nzira dzekutengesa dzemari uye nzira dzekufambisa dzenzvimbo dzekukunda dzinogona kuvakwa pamepu. Uye zvakare, ma serf anogona kugadzwa (kutsaurwa) sevateveri, zvipo zvinogona kupihwa kune varombo uye annexes anogona kuvakwa kune yako abbey. Zvese nechinangwa chekuva vanhu vanotya Mwari zvakanyanya uye vanozvipira. Ichi chinangwa chinoda kwete chete kuzvipira uye kuzvipira asiwo mari.
Pilgrim mutambo une nyore chaizvo musimboti michina. Iwe pachako, iwe unosarudza tile yebasa rimwe chete kana guta, chero paine muteveri mumwe chete ipapo. Vese vateveri vanobva kunzvimbo yakasarudzwa vanotorwa mumaoko ako vobva vaiswa wachi (quests) kana kutevera miseve (guta). Ipapo “chegumi” (mutero wechechi) unogona kusarudzwa kana kuti chiito chinogona kuitwa. Huwandu hwematairi emabasa masere akasiyana anowanikwa, pamwe neakakosha mabasa matanhatu. Nezviito zvematairi ebasa anoenderana, kune dzimwe sarudzo dzinoda kutariswa.
Mushure mekuseta, iyo inopa 160 sextillion (160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) zvinokwanisika mugidhi rekutanga, hapasisina chinhu chisina kurongeka mumutambo. Vanhu 1-4 vanotamba neruzivo rwese rwuripo pamusoro pemaround makumi maviri nematanhatu uye ani nani akaunganidza mapoinzi akawanda pamagumo anogona kubudirira mukaradhi. Mumusiyano wega, zvakakosha kuzvisimbisa uchipokana neAbbott.
Mutambo uyu unokurudzirwa kune makore gumi nemaviri zvichikwira uye unotora anenge 12 maminetsi. Chetatu chinopfuura chakarongwa pakutanga chakatounganidzwa. Iko mukana wekutsigira mutambo pano (LINK) uchiripo kwemazuva makumi maviri nematanhatu.
Izvo zvatova mune yekupedzisira Spieleschmiede update featured fairyland akatanga kuunganidza mari neChina masikati. Inoda kusvika 50% yechinangwa chemari chakatoitwa. Vaya vanofarira vanogona vachiri kutamba mutambo kwemazuva makumi maviri nemashanu mu game forge tsigiro.
Fast mutambo wezwi acrobats
In InWord Chinangwa ndechekutsvaga mazwi akawanda nekukurumidza sezvinobvira. Mutambo uyu une makadhi makumi maviri, rimwe nerimwe richiratidza tsamba. Paround rega rega, makadhi matatu anobatwa padivi nepadivi. Ipapo iwe unofanirwa kuwana mazwi ane, semuenzaniso, mavara SUA mune inorongeka. Nyanzvi dzeGeologist dzinogona kudaidza SUAnit pano, magweta procesSUAl kana mainjiniya anoyerera kuona. Chero ani anofunga kuti hapana izwi rakakodzera remubatanidzwa anogonawo kupfuura. Kana pasina munhu muboka anowana izwi rakakodzera, unowana mapoinzi gumi kana wapasa pekutanga. Kana vatambi vakanyanya kutaura uye vakawana izwi, saka pane gumi minus mapoinzi ekupfuura. Kana vatambi vakati wandei vakawana mazwi akakodzera panguva imwe chete, vatambi vanochinjana kusvika kwasara munhu mumwe chete. Izvi zvinobva zvagamuchira zvibodzwa zvichienderana nemazwi anowanikwa kusvika ipapo.
Hapana nhamba yakatarwa yemarounds emutambo.
Zita rechipiri re zvidiki zvakanaka inokurudzirwa kune 2-6 vanhu vane makore masere uye kupfuura. Nguva yekutamba inopiwa se 8-10 maminitsi. Mapato anofarira ane nguva kusvika zita rinotevera munhevedzano ratanga kuunganidza mari muvhiki pano kubatsira.
Heidelberger Spieleverlag, Cranio Creations CC002 Lorenzo der... * 65,73 EUR tenga
Kare Zvakaipa Zvakafa: Kuburitswa kwemutambo wechiito wakavakirwa pamafirimu echitendero
Inotevera Matatu eQ3: Asmodee inozivisa mamwe bhodhi mutambo magadzirirwo
Crowdfunding: Yazvino mitambo yebhodhi paKickstarter (15th svondo 2021)
Warhammer 40.000: Chaos Gedhi - Daemonhunters: Kuburitswa 2022
Star Wars: Knights of the Old Republic: Remake kana sequel inogona kuuya - kune runyerekupe zvakare
Iyo Cycle: Kupona kupfura kunopinda mune yekupedzisira yakavharwa beta